eNasha.com - रिङ ब्याक् टोन, शहरी र मोबाइल
रिङ ब्याक् टोन, शहरी र मोबाइल
केही दिन यता शहरमा कलर रिङ ब्याक् टोन (सीआरबीटी) को चर्चा छ । हर कोही नयाँ नयाँ र पर्सनलाइज्ड रिङ ब्याक् टोन राखिरहेका छन् । केही दिन यता तपाइँले कसैलाई फोन गर्नुभयो भने रिङ टोनको रुपमा मीठामीठा धुन, गीत र मनपर्ने व्यक्तिको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ (तीमध्ये कुनैकुनै चाहिँ कर्कश पनि हुन सक्छन्, है !) । माफ गर्नुहोला तपाइँले सर्म्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्वीच अफ गरिएको छ र तपाइँले सर्म्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइल व्यस्त रहेको छ भन्ने यी दुइ आवाज मात्रै सुनिरहनु पर्ने बाध्यता अब रहेन ।
हिजो मात्र सुषमाले आफ्नो श्रीमानलाई घर आउन किन ढिला गरिरहेको भनेर रिसले डायल गरिन् । तर उनले सधैँ सुन्ने गरेको टुउँउँट टुउँउँट टोनको साटो एउटा मीठो लोकभाका सुनिन्- नैना रेशम त्यो लाली जोवन, पिरतीले बाँध्यौ यसरी । त्यसपछि त गाली गर्ने उनको मूड यसरी हरायो, कर्कशताको साटो मधुर स्वरले नै आफ्नो श्रीमानलाई घर चाँडो आउन अनुरोध गरिन् ।
यता रमणको कथा अर्कै छ । उनले आफ्नो व्यापारको सिलसिलामा सुरजलाई फोन गरे । फोन चाहिँ अति जरुरी थियो तर सुरजलाई फोन गर्दा सुनेको रिङटोनका कारण उनीहरुको जरुरी वार्ता रमणीय वार्तामा परिणत भयो । टोन कुन फिल्मको र कसले गाएको भन्ने कुरासम्म पुग्यो । उनीहरुले आफ्नो व्यापारको मुख्य सिलसिला नै भुले ।
भर्खरै १२ कक्षा पढ्दै गरेका जिया र सुयशले हिजो स्कूलमा पढाइ भएको बारे सोध्न फोन गर्दा ब्रायन एडम्सको एभ्रिथिङ आई डु गीत सुनेपछि दुवैले पढाइभन्दा संगीतबारे बढी चर्चा गरे ।
त्यसै त नेपालमा कामभन्दा कुरा बढी हुन्छन्, झन् यस्ता रिङ ब्याक टोनले कतिपय व्यक्तिलाई झनै बढी कुरा गर्ने मौका दिएको केहीको आलोचना छ । अनि कोही चाहिँ केसम्म भन्छन् भने नयाँ कुरा बजारमा आएपछि जनचासो त बढिहाल्छ नि !
तर सत्य चाहिँ के हो भने नेपाल टेलिकम र मेरो मोबाइलले मोबाइल गफ गर्नका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गरेयता एसएमएस, एमएमएस, जीपीआरएस्, रिङब्याक्टोनजस्ता सुविधाका कारण प्रयोगकर्ताहरुले यसलाई निकै नै उपयोग गरिरहेका छन् । रिङ ब्याक् टोनको लोकप्रियता यस्तो विधि बढेर गएको छ, एक अनुमान अनुसार हरेक सय मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये ६५ जनाले यो सेवाको उपभोग गरिरहेका छन् । यो आँकडा देखेर एक विज्ञले व्यंग्यमिश्रति लवजमा भने- "यो आँकडाले देखाउँछ, नेपालीहरु धेरै फूर्सदमा छन् र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न लालायित छन् ।"
नेपाल टेलिकमका अनुसार यो सेवा तपाइँले फागुनको ३० गतेसम्म मात्र निःशुल्क पाउनु हुनेछ । त्यसपछि भने यस्तो रिङ ब्याक टोन प्रयोग गरेबापत् महिनाको ५० रुपियाँ र हरेक टोनको न्यूनतम् १० रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि तर ढुक्क हुनुहोस्, नौ दिनअघि तपाइँले यसलाई निकै नै आनन्दपूर्वक प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ ।
निकट भविष्यमा नेपाल टेलिकमबाट अझ बढी आशा गर्नुहोस् किनभने यसको लोकप्रियता हेर्दै उसले अन्य सुविधाहरु पनि थपिरहेको छ । जस्तो यसमा आफैँले बोलेका कुराहरु रिङब्याक टोन बनाउन सक्नुहुन्छ र व्यक्तिपिच्छे फरक-फरक टोन सेट गर्नुहुनेछ । राति १० बजिसकेपछि तपाइँको न्रि्रा कसैले खल्बल्याउन चाहे रातिहुँदा "म अहिले सुतिसकेको छु" भन्दै न्रि्रा हराम नगर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाइँले ज्यादै मन पराएकी युवतीलाई आमनेसामने भन्न नसक्नु भएको कुरा पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै रिसाएकी श्रीमतीलाई अनेक ठट्टा सुनाएर फुल्याउन सक्नुहुनेछ । अथवा शनिबारको दिन कसैले व्यवधान नगरोस् भनेर त्यस्तै किसिमको टोन पनि राख्न सक्नुहुनेछ ।
उसो भए यस्तो रमाइलो अवसर किन त्याग्ने ? यसको भरपूर फाइदा आजै उठाउनुहोस् ।
CRBT सेवा प्रयोग गर्ने तरिका
आफ्नो मोबाइलमा १६०९ डायल गर्नुहोस् र फोनमा सुनिने निर्देशनको पालना गर्नुहोस् ।
अथवा, www.ntc.net.np मा गई रेजिष्टर गर्नुहोस् ।
मोबाईल संविधानसभा माओवादी हल्ला awards समलिङगी पेट्रोल streets सेलेब्रिटी crisis celebrity अनुभव festival hi-life events